काममा हिज्जे गल्तीहरू प्रतिबन्धित गर्नुहोस्
द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | Mar 14, 2021 | लिखित र मौखिक संचार कौशल
दैनिक जीवनमा लेख्नु बिना यो गर्न सम्भव छ, तर तपाइँ यसलाई कार्यस्थलमा उम्कन सक्नुहुन्न। वास्तवमा तपाईले रिपोर्टहरू, अक्षरहरू, इ-मेलहरू, इत्यादि लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै, गलत हिज्जेहरूलाई बेवास्ता गर्नु महत्त्वपूर्ण छ किनकि त्यसले तपाईंलाई खराब देखाउन सक्छ। साधारण गल्तीको रूपमा देखी टाढाबाट, यसले तपाईंको कम्पनीको छविलाई बिगार्न सक्छ।
हिज्जे गल्तीहरू: बेवास्ता गर्नु हुँदैन
फ्रान्समा हिज्जे धेरै गम्भीर रूपमा लिइन्छ विशेष गरी व्यावसायिक क्षेत्रमा। वास्तवमा धेरै वर्षदेखि, यो प्राथमिक विद्यालयको बर्षसँग जोडिएको छ।
त्यस बाहेक, तपाइँले यो जान्नुपर्दछ कि हिज्जे मास्टर गर्ने तथ्य भिन्नताको संकेत हो। यसैले, तपाईं न सम्मान गर्न सक्नुहुनेछ र न विश्वासयोग्य फेला पार्न सक्नुहुनेछ जब तपाईंसँग खराब हिज्जे छ।
जस्तो तपाईले बुझ्नुहुनेछ, राम्रो हिज्जे राख्नु भनेको लि writes्ग गर्ने व्यक्तिको लागि तर उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने कम्पनीको लागि पनि मानको संकेत हो। यदि तपाईं यसलाई मास्टर गर्नुभयो भने तपाईं विश्वसनीय हुनुहुन्छ। अर्कोतर्फ, तपाईंको विश्वसनीयता र कम्पनीको कडाइका साथ प्रश्न गरिन्छ जब तपाईं हिज्जे गल्ती गर्नुहुन्छ।
हिज्जे गल्तीहरू: खराब छापको संकेत
भोल्टेयर प्रोजेक्ट हिज्जे प्रमाणीकरण निकायका अनुसार, ई-कमर्स साइटहरूमा बिक्री हिज्जे त्रुटिहरूको कारण आधा हुन सक्छ। त्यस्तै, पछिल्लो ले ग्राहक सम्बन्धलाई हानी गर्दछ।
अर्कोतर्फ, जब तपाईं हिज्जे गल्तीहरूको साथ मेल पठाउनुहुन्छ, तपाईं विश्वसनीयता गुमाउनुहुन्छ। तपाईं आफ्नो व्यवसायलाई पनि क्षति पुर्‍याउँदै हुनुहुन्छ, जुन अब अरूको आँखामा भरोसा हुने छैन।
रिड मेलको उदाहरण भुक्तान बिना छोड्नुहोस् अनुरोध गर्न।
त्यसैगरी, पठाउने ए ई-मेल हिज्जे गल्तीहरू प्राप्तकर्ताको लागि अनादरको रूपमा हेरिन्छ। वास्तवमा, उसले भन्नेछ कि तपाईंले आफ्नो सामग्रीलाई प्रमाणित गर्न र उहाँलाई यो इ-मेल पठाउनु अघि कुनै गल्तीहरू सच्याउन समय लिन सक्नुहुन्थ्यो।
हिज्जे गल्तीहरूले अनुप्रयोग फाईलहरू बदनाम गर्दछ
सावधान रहनुहोस् कि हिज्जे त्रुटिहरूले पनि अनुप्रयोग फाइलहरूमा प्रभाव पार्छ।
वास्तवमा, ruit०% भन्दा बढि भर्तीकर्ताहरूले उम्मेद्वारको खराब प्रभाव पार्दछन् जब उनीहरूले आफ्नो फाइलहरूमा हिज्जे त्रुटिहरू देख्दछन्। तिनीहरू निश्चित रूपमा आफैलाई भन्छन् कि तिनीहरू भर्ती हुँदा कम्पनीको पर्याप्त प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम हुनेछैनन्।
थप रूपमा, यो भन्नु पर्दछ कि मानिसहरुले ती चीजहरुलाई अधिक मूल्य र महत्व दिन्छ जुन उनीहरुका अपेक्षाहरु लाई पूरा गर्छन्। यस अर्थमा, यो स्पष्ट छ कि भर्तीकर्ताहरूले जहिले पनि राम्रोसँग तैयार फाइलको अपेक्षा गर्छन्, हिज्जे त्रुटिहरू र उम्मेद्वारको प्रेरणालाई दर्शाउँछ।
यही कारण हो कि जब उनीहरूले कुनै अनुप्रयोगमा त्रुटिहरू फेला पार्दछन्, तिनीहरूले आफैलाई भन्ने गर्छन् कि आवेदक आफ्नो फाइलको तयारीको क्रममा विवेकशील थिएनन्। उनीहरूले सोच्न सक्छन् कि उनी ओह्रामा खासै चासो राख्दैनन्, त्यसैले उनले आफ्नो आवेदनको समीक्षा गर्न समय लिएन।
हिज्जे गल्तीहरू प्रोफेशनल विश्‍वमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको लागि प्रवेशमा वास्तविक बाधा हो। समान अनुभवको साथ, त्रुटिहरूको साथ एक फाइल त्रुटि बिना फाइल भन्दा बढी अस्वीकार गरिन्छ। यो यस्तो हुन्छ कि मार्जिनहरू टाईपोसको लागि सहन गरिन्छ। जे होस्, तपाईको उत्तम शर्त तपाईको पेशेवर लेखनमा गल्तीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनु हो।
रिड विलम्बलाई औचित्य गर्न इमेल टेम्पलेट
काममा हिज्जे गल्तीहरू प्रतिबन्धित गर्नुहोस् मार्च 19th, २०२०Tranquillus
अघिल्लोकाममा राम्रो लेख्ने योजना बनाउनुहोस्
निम्नबिमारी: के एक कर्मचारी जसले आफ्नो काम रोक्ने ठाउँ रिपोर्ट गर्दैन बेमानी बनाउन सकिन्छ?
कसरी यसको रूपरेखा को सफल बनाउन?
मस्यौदा चरण राम्रोसँग लेख्न
तपाईंको ई-मेल हस्ताक्षर कसरी सजिलै र निःशुल्कको लागि सिर्जना गर्ने
Cybercourtoisie को रूपरेखाको अनुस्मारक